IPhone Yangu Haigoni Kuwana Printer Yangu! Heino Iyo Chaiyo Kugadzirisa. - Payette Pamberi - Iphone
chena iphone ine nhema screen
ko vese vandaibata navo vakaenda kupi
iphone 6 pamwe nebheteri yero
nei chitoro cheapp chakaramba kadhi rangu
Iwe haugone kubatanidza yako iPhone kune yako purinda uye iwe hauzive nei. IPhone yako yakabatana neWi-Fi neBluetooth, uye purinda yako inogoneswa neAirPrint, asi haugone kudhinda mapikicha nemamwe magwaro. Muchinyorwa chino, ndicha tsanangura kuti nei iPhone yako isingakwanise kuwana purinda yako uye kukuratidza maitiro ekugadzirisa dambudziko racho zvakanaka !
Chii chinonzi AirPrint?
AirPrint hunyanzvi hwakagadzirwa neApple izvo zvinoita kuti zvive nyore kune vashandisi veMac uye iOS kudhinda mapikicha nemamwe magwaro zvakananga kubva kune yavo kifaa. NeAirPrint, haufanire kumisikidza mutyairi kuti udhindise mafaera ako kubva kuMac uye maIOS madhizaini. Unogona kushanyira webhusaiti yeApple kuti uone iyo yakazara rondedzero yeAirPrint-inogonesa maprinda .
Sei iPhone Yangu Isingakwanise Kuwana Printer Yangu?
Pari zvino, hatigoni kuva nechokwadi nei iPhone yako isingagoni kuwana purinda yako kana kuti ndeipi yemidziyo yako iri kukonzera dambudziko. Pane zvinhu zvitatu zvinoshanda pamwechete kupurinda chimwe chinhu kubva ku iPhone yako:
Yako AirPrint-inogonesa purinda kana yekudhinda server.
Yako isina waya router.
Nyaya ine chero chimwe chezvinhu izvi inogona kudzivirira yako iPhone kubva mukutsvaga nekubatanidza kune yako printa. Tevedza matanho ekugadzirisa matambudziko pazasi pekuongorora uye gadzirisa iyo chaiyo chikonzero nei yako iPhone isingawane yako printa!
Tangazve Yako iPhone, Printer, Uye isina waya Router
Kutangazve zvigadzirwa zvako iri nyore nhanho yekutanga yatinogona kutora kuyedza uye kugadzirisa diki software glitch. Pane nzira mbiri dzakasiyana dzekutangazve yako iPhone zvichienderana nekuti ndeipi modhi yaunayo:
iPhone 8 kana pakutanga : Dhinda uye ubatise bhatani remagetsi kudzimara iyo 'slide yekudzima magetsi' inotsvedza yaonekwa pachiratidziro. Rova zvakasimba ikoni yemagetsi kuruboshwe-kuenda-kurudyi kuti uvhare yako iPhone. Mira masekondi mashoma, wobva wadzvanya wabata bhatani remagetsi zvakare kusvikira iyo logo yeApple yaonekwa pakati pekona.
iPhone X kana nyowani : Panguva imwe chete pinda uye ubatise bhatani repadivi uye chero bhatani revhoriyamu kudzamara 'slide yekudzima simba' ichioneka pachiratidziri. Rova zvakasimba ikoni yemagetsi kubva kuruboshwe-kuenda-kurudyi kudzima yako iPhone. Kuvhura yako iPhone zvakare, pinda uye bata bhatani repadivi kusvikira iyo logo yeApple yaonekwa pachiratidziri.
Ko odha yemari inozadzwa sei?
Iyo nzira yekutangazve purinda yako uye router zvishoma zvishoma zvakaoma. Vabudise kubva pamadziro, uye wozodzosera zvakare mukati. Ndizvozvo!
Dzorera Wi-Fi neBluetooth Kubva Uye Kudzoka Pairi
Kuchinja Wi-Fi neBluetooth kubva nekudzoka pane dzimwe nguva kunogadzirisa diki software glitch inodzivirira yako iPhone kubva pakubatana neWi-Fi manetwork kana maBluetooth michina.
foni yangu inoti kuchaja kwayo asi haina kuiswa mukati
Kutanga, vhura Zvirongwa uye pombi Wi-Fi . Kuti ubvise Wi-Fi, tinya switch padivi peWi-Fi kumusoro kwescreen. Iwe uchaziva kuti Wi-Fi yakadzimwa kana switch iri chena.
Tinya switch kechipiri kudzosera Wi-Fi kumashure. Iwe uchaziva kuti Wi-Fi irimowo zvakare kana switch iri green.
Tevere, dzokera kuZvirongwa uye tap Makaralı . Kungofanana nezvakaitika pakutanga, tora switch iri pamusoro pechidzitiro padyo neBluetooth kuti uidzime. Wobva wadzvanya switch kechipiri kuti ubatidze Bluetooth zvakare.
Indaneti yako ingangodaro ine mhosva kana iwe uchiri kunetseka kubatanidza yako iPhone (kana zvimwe zvishandiso) kune yako Wi-Fi network. Tarisa uone yedu imwe nyaya kuti udzidze zvekuita kana yako iPhone haizobatanidzi kuWi-Fi !
ndakabvarura screen yangu ye iphone
Gadziridza yako iPhone (Uye Printer Kana Zvichiita)
Izvo zvakakosha kuti uve nechokwadi chekuti iwe unogara uchichengeta yako iPhone uye printa izvino neshanduro dzazvino software yavo. Kushandisa zvishandiso zvinechinyakare software zvinogona kukonzera nyaya dzakasiyana!
Kutanga enda kune Zvirongwa -> General -> Software Gadziriso pane yako iPhone kuti uone kana vhezheni itsva yeIOS iripo. Tinya Dhawunirodha uye Isa kana paine nyowani iOS yekuvandudza.
Tarisa webhusaiti yako inogadzira webhusaiti kuti uone kana inogadziridza iripo, kana kana purinda yako inogona kutogadziridzwa. Haasi ese maprinta ane software inogona kuvandudzwa.
Kanganwa Printer Yako SeBluetooth mudziyo
Kana yako iPhone ikabatana nekombuta yeBluetooth kekutanga, inochengetedza data nezve mudziyo uye sei kubatana kune mudziyo . Kana iko kubatanidza maitiro kwachinja, zvinogona kunge zvichitadzisa yako iPhone kubva kubatanidza kune yako purinda kuburikidza neBluetooth. Nekukanganwa purinda yako sechigadzirwa cheBluetooth, tinogona kuibatanidza ku iPhone yako zvakare sekunge ndiyo nguva yekutanga.
Vhura Zvirongwa uye tapira Makaralı . Tarisa purinda yako mune yakadanwa inonzi Zvangu Zvishandiso uye tora bhatani reruzivo (iro rebhuruu i) kurudyi. Pakupedzisira, tapira Kanganwa Ichi Chishandiso kukanganwa purinda yako pane yako iPhone.
Dzokera ku Zvirongwa -> Bluetooth kutanga kubatanidzazve yako iPhone kune yako purinda. Zita reprinta yako richaonekwa pane iri pazasi pazasi Mamwe Midziyo . Tinya pazita reprinta yako kuti ubatanidze iyo kune yako iPhone!
maitiro ekudzorerazve app chitoro pane ipad
Kugadzirisazve maratidziro enetiweki pane yako iPhone kunodzima ese maBluetooth, Wi-Fi, VPN, uye maCellular marongero pane yako iPhone uye oadzosera iwo kumafekitori ekutadza Panzvimbo pekutsvaga pasi chinetso cheBluetooth kana yeWi-Fi pane yako iPhone, isu tichaedza kuibvisa zvachose. Mushure mekuita izvi zvekumisazve, uchafanirwa kuisazve mapassword ako eWi-Fi uye wobatanidzazve zvigadzirwa zvako zveBluetooth.
Kuti umise zvakare maratidziro epaseti pane yako iPhone, enda ku Zvirongwa -> General -> Seta zvakare uye tapira Dzorerazve Network Zvirongwa . Wobva wadzvanya Reset Network Zvirongwa zvakare kuti usimbise kuitazve. Yako iPhone inodzima, kugadzirisa patsva maratidziro ayo, uye dzoka zvakare.
Kana yako iPhone ichiri kutadza kuwana yako printa, inguva yekubata Apple rutsigiro. Mumiriri webasa revatengi anozogona kugadzirisa rakanyanya kuoma software kana dambudziko rehardware. Kushanya Webhusaiti yekutsigira Apple kuseta runhare, kutaurirana pamhepo, kana musangano kuApple Store yako.
ruoko rwekuruboshwe runochemera muchindwe zvichireva
Bata Yako Printer Mugadziri
Iwe ungangodawo kufunga nezvekufonera mutengi inotsigira nhamba yekambani inogadzira purinda yako. Panogona kuve nechinetso chehardware neprinta yako iyo chete mugadziri achakwanisa kukubatsira nayo. Kuti uwane nhamba yekutsigira yevatengi yemugadziri wako weprinta, Google 'rutsigiro rwevatengi' uye zita remugadziri.
IPhone yako yawana uye yakabatana neprinta yako! Iye zvino iwe unozoziva chaizvo zvekuita inotevera nguva iyo yako iPhone isingakwanise kuwana yako printa. Inzwa wakasununguka kusiya chero mimwe mibvunzo yauinayo yaPayette Pamberi muchikamu chemashoko pasi pazasi.